Wararka Dibada	Wadaad caan ah oo lagu weeraray dalka Filibiin.
Saacado ka hor waxaa dalka Filibiin lagu beegsaday wadaad caan ah oo katirsan Culimada taageera Nidaamka Aala-Sucuud ee ka arimiya dhulka Xarameynka. Qof hubeysan ayaa rasaas ku furey Gaariga Shiikh Caa’id Al-Qarni mar uu ka ambabaxayay goob uu Muxaadaro ka jeedinayay oo ku taalla magaalada Zanbuwanga ee dalka Filibiin. Wadaadka la beegsaday ayaa waxaa goobta kasoo gaaray dhaawac fudud sida ...	Read More »
Ururka Shiiciga ah ee Xisbullaah oo shaaca ka qaaday in Suuriya looga dilay Sarkaal sare.
Ururka Shiiciga ah ee lagu magacaabo Xisbullaah, fadhigiisuna yahay dalka Lubnaan ayaa si muuqata waxa uu kaga qayb gaadanayaa dagaalka inakbadan 5 sano ka socda dalka Suuriya ee u dhexeeya Muslimiinta iyo Nusayriyada Bashaar Al-Asad. Xibiga ayaa kumanaan katirsan Ciidankiisa iyo Saraakiil sar sare wax uu usoo diray Jaxiimada Suuriya, iyagoo hadafkoodu yahay iney ilaaliyaan Nidaamka sii liicaya ee Asad, ...	Read More »
Baarlamaanka dalka Masar oo aan wax badan ka duwaneyn kan ka jira magaalada Muqdisho marka lo eego dhanka Akhlaaq darada, waxaana dhowr jeer dhacay gacan qaad ka dhexeeya Xillibaanada iyagoo isku buuqa. Dhawaan ayaa mid kamid ah Xillibaanada baarlamaanka masaarida waxa uu u gacan qaaday xillibaan kale oo lagu magacaabo Towfiiq Cukaasha kaas oo dhawaan gurigiisa ku marti qaaday Safiirka ...	Read More »
Nidaamka Nasayriga iyo Ruushka oo jabiyey Xabad joojinitii la dhex dhigay iyaga iyo Mucaaradka.
Iyadoo maalintii labaad ay galeyso waqtigii ay bilaabatay Xabad joojinta u dhexeysa Nidaamka iyo Kooxaha Mucaaradka, ayaa hadana waxaa muuqata in Ruushka iyo dabadhilifkiisa Bashaar aysan u hogaansamin Xabad joojintaas. Diyaaradaha Nidaamka iyo kuwa Ruushka ayaa duqaymo xoogan oo Arxan darro ah waxay ka fuliyeen deegaano ay maamulaan kooxaha Mucaaradka, taas oo keentay dhimasha iyo dhaawac soo gaartay dadka Shacabka ...	Read More »
Dowladda Islaamiga ah oo la wareegtay deegaanno hoos yimaada magaalada Baqdaad.
Sida ay sheegeen Ilo amaan oo lagu kalsoonaan karo dagaalyahanno katirsan dowladda Islaamiga ah ayaa la wareegay deegaano dhaca duleedka magaalada Baqdaad, kuwaas oo Istiraatiji ah. Ciidamo katirsan kuwa Mujaahidiinta ayaa si qarsoodi ah oo aan la fahmin waxay ugu gudbeen deegaano hoos yimaada degmada Abuu Qariib halkas caan ku ah xabsigii sumcada darnaa ee sanadkii 2003 lagu tacdiibin jiray ...	Read More »
Dhaalibaan oo Weeraro xoogan ka fulisey dalka Afgaanistaan.
Maalintii shalay oo Sabti ahayd waxaa dalka Afgaanistaan ka dhacay weeraro xoogan, kuwaas oo ay fuliyeen Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Dhaalibaan. Weerarada dhacay oo tiradoodu gaarayso illaa labo Weerar ayaa waxay ka kala dhaceen magaalada Kaabul iyo gobolka Koonaar ee dhaca bariga dalka Afqaanistaan. Weerarka ka dhacay Kaabul waxaa fuliyey mid kamid ah Mujaahidiinta, waxaana uu ka dhacay ...	Read More »
Jabhadda Al-Nusra oo War cad kasoo saartey Xabad Joojintii Ruushka iyo Mareykanku ka gaareen Suuriya.
Mu’assasada Warbaahineed ee Manaaratul Baydaa ayaa baahisay kalimad maqal ah oo uu jeedinayo sheekh Abuu Muxamed Al-Jowlaani oo ah amiirka Jabhadda Al-Nusra ee dhulka Shaam. Kalimada oo ciwaan looga dhigay “ kani waa Yabooyihii Alle iyo Rasuulkiisa” ayaa shiikha waxa uu kaga hadlay mowqifka Jabhadda ee ku aadan Xabad joojintii dhawaan la dhex dhigay Nidaamka Bashaar iyo inta badan kooxaha ...	Read More »
Weerar ka dhacay Mareykanka oo sababay dhimasho iyo dhaawac farabadan.
Qof hubeysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday dad Ameerikaan ah kuwaas oo ku sugnaa gudaha shirkad ku taalla mid kamid ah gobolada dalka Mareykanka. Weerarka ayaa ka dhacay gobolka Kansas ee bartamaha dalka Mareykanka, waxaana qof hubeysan uu rasaas la dhacay dad ku sugnaa gudaha shirkad lagu magacaabo Accel, isagoona halkaas ku dilay kuna dhaawacay tiro badan. Warbaahinta Mareykanka ayaa ...	Read More »
Duqaymo ka dhacay dalka Suuriya oo ay dad ku shahiideen.
Duqaymo xoogan oo arxan daro ah ayay diyaaradaha Ruushka waxay ka wadaan gobollo kala duwan oo kamid ah dalka Suuriya, kuwaas oo ay ku shahiideen dad Muslimiin ah oo dumar iyo Caruurba ku jiraan. Saacado ka hor ayaa waxaa duqeymo xoogan lagu garaacay deegaano kamid ah gobollada Xalab, Idlib, iyo Darcaa kuwaas oo deegaanno badan oo kamid ah ay maamulaan ...	Read More »
Diyaarad ay saaran yihiin inkabadan 20 Ruux oo lagu la’yahay gudaha dalka Nibaal.
Sida ay sheegtay shirkadda duulimyaadyada Taara Ayr ee dalka Nibaal, waxaa la la’yahay raadka diyaarad ay saarnaayeen 21 Ruux, taas oo saaka ka duushey magaalada Bookahaara kuna sii jeeday magaalo kale oo lagu magacaabo Joomsoom. Maamulka Diyaarada ayaa sheegay in diyaaradu saarnaayeen 21 Ruux, waxaana uu sheegey maamulku in mar qora ah la waayey xiriirkii Diyaaradda, waxaana xilligaas ay mareysay ...	Read More »
Page 40 of 41« First...102030«3738394041	»	GURMADKA ABAARAHA BAY IYO BAKOOL GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan